केनेडे निर्माण र कारखानाबाट चीन रिचार्जेबल प्रशंसक | केनेडे
त्यो धेरै राम्रो छ-----प्यानले कम गतिमा लगभग एक हप्ता काम गर्न सक्छ। मिड स्पीडमा दुई दिन र हाई स्पीडमा १५ घण्टा
लचिलो फ्यान—-जंगलीमा रहेको आफ्नो सानो कोठामा उत्तम हावा प्रवाह गर्नको लागि तपाईंले फ्यानको बडी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
टाइमर - तपाईंलाई सुत्दा धेरै हावा प्रवाह गर्न आवश्यक नपर्दा ऊर्जा बचत गर्न मद्दत गर्न
ठुलो ह्यान्डल र नीलो रङ—- तपाईंको क्याम्पिङ वातावरणमा उपयुक्त छ, यसले भारी शुल्क र भरपर्दो उत्पादन छाप दिन्छ
समायोज्य प्रशंसक गति: कम / मध्यम / उच्च। विभिन्न वातावरण र फरक तापक्रम अन्तर्गत थप विकल्पहरू छन्। तपाईंको लागि सबैभन्दा व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता अनुभव ल्याउँदै।
राम्रो गुणस्तरको ब्याट्री: हामी लिथम वा लीड-एसिड ब्याट्री प्रयोग गर्छौं, जुन हामी आफैले बनाउँछौं, गुणस्तर र एक वर्षको वारेन्टी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।
पावर-सेभिङ टेक्नोलोजी: एयर कन्डिसनर र अन्य टावर फ्यानहरूको तुलनामा, हाम्रा फ्यानहरू अधिक ऊर्जा-कुशल र ऊर्जा-बचत छन्। हाम्रा फ्यानहरूले तपाईंको कोठाको हावा प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले यो थप स्वास्थ्य-अनुकूल छ।
DC टेक्नोलोजी र ऊर्जा कुशल: यो मौन प्रशंसक सुपर ऊर्जा कुशल छ! यो डेस्क फ्यानले सबैभन्दा उन्नत DC मोटर छान्छ जसको स्पष्ट फाइदाहरू ऊर्जा कुशल, शान्त र लामो सेवा जीवन हो। बिजुली खपत मात्र 3-24W हो, यसको मतलब 330 घण्टा निरन्तर प्रयोग (न्यूनतम सेटिङ) को लागि मात्र 1 kWh आवश्यक छ, जसले AC मोटर फ्यानहरूको तुलनामा 80% बिजुली बचत गर्न सक्छ! साथै, एयर कन्डिसनरको साथ यो कुलिङ फ्यान प्रयोग गर्नुहोस्, यसले एयर कन्डिसनरको 80% दक्षता बढाउनेछ!
शयनकक्षको लागि अल्ट्रा शान्त फ्यान: शीर्ष वायुप्रवाहको साथ, यो कम्प्याक्ट टेबल फ्यानले तपाइँका सबै आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सक्छ। DC प्रविधिद्वारा सञ्चालित, बिजुलीको फ्यान असाधारण रूपमा शान्त छ र कोठालाई शान्त रूपमा चिसो पार्न कुशल छ ताकि तपाईं आरामसँग सुत्न सक्नुहुन्छ। शोरको स्तर 25dB जति कम छ, यो शयनकक्ष, बच्चाहरूको कोठा र कार्यालयहरूको लागि उपयुक्त बनाउँदै बडबड गर्ने नाला वा हल्का कानाफूसीको बराबर छ। यो शान्त फ्यान थोरै सुत्ने, बुढाबुढी र बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ, तपाईंलाई मीठो सपना देख्न दिनुहोस्।
रिचार्जेबल 16” दोलन3स्पीड रिमोट कन्ट्रोल 3-इन-1 स्ट्यान्ड फ्यान
प्रशंसक आकार: 16 इन्च
गति:3गति चयन
टाइमर: 1-7 घण्टा टाइमर
ब्याट्री: 2x 6V 4500mAh रिचार्जेबल लीड-एसिड ब्याट्रीहरू
एलईडी बत्ती: एलईडी रात बत्ती
हावा मोड: सामान्य
रिमोट: रिमोट कन्ट्रोलको साथ
पावर आउटपुट: छैन
3-in-1:3प्रकारको उचाइ वैकल्पिक
केबल वा प्लग: एसी पावर केबल इनपुट र चार्ज
प्याकिंग: 1 पीसी / बक्स,2पीसी / दफ़्ती
कार्टन आकार: 60.2x34.5x50.8 सेमी
रिचार्जेबल 12” दोलन3स्पीड टेबल फ्यान
प्रशंसक आकार: 12 इन्च
ब्याट्री: 2x 4V 3000mAh रिचार्जेबल लीड-एसिड ब्याट्रीहरू
कार्टन आकार: 51.5x35.5x36.2 सेमी
लिथियम ब्याट्री रिचार्जेबल ३ स्पीड ओसिलेटिंग ९” टेबल फ्यान एलईडी बत्तीको साथ
प्रशंसक आकार:9इन्च
ओसिलिटिंग: हो (बायाँ र दायाँ तर्फ)
ब्याट्री: 7.4V 3600mAh रिचार्जेबल लिथियम ब्याट्री
एलईडी बत्ती: 12PCS 0.1W एलईडी बत्ती
केबल वा प्लग: १ मिटर सामान्य दुई गोल पिन केबल
कार्टन साइज: 56.5x37.5x41.1 सेमी
अघिल्लो: घर र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि धुंध Humidifier